Ntị maka eriri USB-C nke ị na-eji na MacBook ọhụrụ gị, ị nwere ike ịkwụ ụgwọ ya | Esi m mac
Miguel Angel Juncos | | MacBook, Mac kọmputa, ọtụtụ
Mkpebi Apple gụnyere ịgụnye otu USB-C na MacBook achọpụtala na ebe ọ bụ na ọ kababeghị ọkwa na ụlọ ọrụ ahụ, ndị ọrụ zụrụ akụrụngwa a ga-agba ọsọ ịzụta ọtụtụ nkwụnye na eriri iji mee ka ha dakọtara. enweworị ma ọ bụ nweta ndị ọhụrụ wee si otú a nwee ike ijikọ ngwaọrụ "ochie" ha.
Agbanyeghị, ọ dị mkpa ịmara nke ndị ịzụrụ na n'oge a, ọtụtụ ihe nkwụnye na eriri ndị a na-ere ahịa nwere ike ime ka anyị kwaa mmakwaara ma ọ bụrụ na anyị ahọrọ nhọrọ dị ọnụ ala.
Ihe nlereanya kachasị mma anyị nwere na Fans nke akụrụngwa hi-fi, nke ahụ bụ ịsị, ụdị ndị ọrụ a na-akpachapụ anya mgbe niile na ogo nke eriri, ebe ụfọdụ na-agbachitere mkpa ọ dị ịchebe eriri na njikọta ọla edo iji meziwanye ogo nke ọdịyo ahụ, ndị ọzọ na-ekwusi ike na ọ bụ ahụghị ihe dị iche.
Ka anyị na-aga n’ihu, otu a na-eme na ngwa kọmputa. O siri ike ịkọ eriri dị ọnụ ala site na nke dị oke ọnụ. Ọ bụ eziokwu na mgbe ụfọdụ ahịa na-eweta ọnụ ahịa karịa ihe ọ na-enye ndị na-azụ ahịa ebe eriri USB 20 Euro na-eme otu ihe ahụ dị ka 15 Euro otu, mana anyị ekwesịghị ịghọgbu anyị site na ahịa, ebe ọ bụ na eriri igwe 3 Euro agaghị adị mma.
Otu onye otu Google Pixel, Benson Leung, abụrụla nke a Nyochaa eriri USB-C dị iche iche a na-enye na Amazon ọnwa ole na ole, nke ka ukwuu iji chọpụta ma ọ bụrụ na ha ezute nkọwa USB-C.
Ọtụtụ n'ime ihe ndị ọ nyochara ka agbanwere na nkọwa ahụ, agbanyeghị na ọ hụrụ onye ọzọ nwere njikọ ahụ n'ụzọ ezighi ezi ma ọ bụ ụfọdụ ụfọdụ na ala na-ezighi ezi. Ihe si na ya pụta Ihe Pixel Chromebook nwụrụ na ndị nyocha USB abụọ ejikọrọ n'oge ahụ, ghere eghe.
The ika kpọmkwem ọ bụ SurjTech na o nwere ọnụ ahịa 9.98 dollar. N'okwu a, anyị agaghị ekwu maka ihe ga-abụ ọnụahịa ziri ezi iji nweta otu ma ọ bụ eriri ọzọ, kama ọ bụ echiche ziri ezi nke onye zụrụ ahịa.
Ọ bụ ezie na e ji Chromebook mee ihe ọmụmụ ahụ, anyị nwere ike iwepụta ya na 12 ″ MacBook, eriri anyị na-eji nwere ike ịbụ ezigbo enyi anyị ma ọ bụ onye iro kachasị njọ n'otu oge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac kọmputa » MacBook » Ntị maka eriri USB-C nke ị na-eji na MacBook ọhụrụ gị, ịnwere ike ịkwụ ụgwọ ya
Apple bụ ụlọ ọrụ kachasị baa uru n'ụwa